“အတွေးစလေးတွေ”: ကမ္ဘာ့သရဲအခြောက်ဆုံး ၁၀နေရာ . . .
သရဲတွေအကြောင်းနဲ့ သဘာဝလွန်ဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းကို တော်တော်လေး အာရုံကျနေတာကြောင့် လိုင်းပေါ်တက်ပြီး မွှေနှောက်ရှာဖွေမိပါတယ်။ အဲဒီမှာပဲ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာ ၁၀နေရာအကြောင်းစုစည်းတင်ပြထားတာကို တွေ့ရလို့ ဘာသာပြန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရတဲ့အခါ သူ့အာဘော်အတိုင်း မူရင်းအရသာမပျက်ရလေအောင် ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်။
အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ ကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထအောင် ဖြစ်စေတဲ့နေရာတစ်ခုကို သင်ရောက်ဖူးပါသလား။ အဲဒီလို အတွင်းစိတ်ကနေ စိမ့်ပြီးကြောက်တာမျိုးကို Déjà Vu လို့ခေါ်ပါတယ်။ အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နေရာတွေကိုသွားရင်တော့ အဲဒီခံစားချက်မျိုးသေချာပေါက်ရမယ်လို့ ဆိုထားပါတယ်။
1. Borley Rectory, England
အပေါ်မှာပြထားတဲ့ အိမ်ကတော့ ခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောထားပြီး ၀င်သွားလို့ရမယ့်နေရာမျိုးမဟုတ်ပါ။ Sudbury, UK အနီးမှာရှိတဲ့ Borley ရွာကလေးဟာ ၀ိညာဉ်တွေနဲ့ ပတ်သက်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်ရုံသာမက ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့စရာကောင်းလှတဲ့ ဒေသတစ်ခုအဖြစ်လည်း ကျော်ကြားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် “အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာ”အဖြစ် ယူဆလို့ရတဲ့နိုင်တဲ့
Borley Rectory ဘုရားကျောင်း ရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်။
၁၈၆၃မှာ Reverend Henry Bull ကတည်ဆောက်ပြီးစီးကဲ့တဲ့ ဒီဘုရားကျောင်းဟာ ရှေးကျတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းဝန်းထဲမှာ တည်ရှိပါတယ်။ 'Nun's Walk' လို့ခေါ်တဲ့ ၀မ်းနည်းပူဆွေးပြီး သနားစရာကောင်းလှတဲ့ သီလရှင်တစ်ပါး သွားလာနေတာကိုလည်း ဒီဘုရားကျောင်းမှာ မကြာခဏ တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ ပုံပြင်ဟောင်းတစ်ပုဒ်အရ ဒီဆရာလေးဟာ Borley Monastery က ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးနဲ့ မဖြစ်နိုင်မှန်းသိပါလျက်က ချစ်ကြိုးတွေသွယ်မိခဲ့ကြပါသတဲ့။ သူတို့နှစ်ယောက်ဟာ တိတ်တဆိတ် ခိုးရာလိုက်ကြဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘဲ အဖမ်းခံခဲ့ကြရပါတယ်။ ဘုန်းတော်ကြီးကတော့ သေဒဏ်ပေးခံခဲ့ရသလို သနားစရာဆရာလေးကတော့ ဘုရားကျောင်းရဲ့ မြေအောက်ခန်းထဲမှာ အရှင်လတ်လတ်လှောင်ပိတ်ပြီး သေတဲ့အထိအပစ်ဒဏ်ပေးခံခဲ့ရပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ သရဲပုံပြင်တွေကတော့ မရေမတွက်နိုင်အောင်များလှပါတယ်။ အဲဒီထဲက တစ်ချို့ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ ကြောစိမ့်ဖို့အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်သည်းဖို စာရေးဆရာကြီး Stephen King ရဲ့ဝထ္ထုကို အခြေခံပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ The Shining ဇာတ်ကားကို အများစုကတော့ မှတ်မိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းကို အထက်ကဟိုတယ်မှာပဲ ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး ရေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခန်းနံပါတ် ၂၁၇မှာ တည်းနေချိန်မှာ ဟိုတယ်လမ်းမတစ်လျှောက် ၀ိညာဉ်ကလေးတွေ ကစားနေတဲ့အသံတွေကြားရတယ်လို့ စာရေးဆရာက ဆိုပါတယ်။ လာတည်းကြတဲ့ ဧည့်သည်အများစုလည်း ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ ကြုံခဲ့ကြရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဟိုတယ်မှာ ရှင်သန်နေကြဆဲဖြစ်တဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကတော့ အန္တရာယ်ပေးခြင်းမရှိပါ။ ၀ိညာဉ်ပေါင်းများစွာဟာ ဒီဟိုတယ်မှာ ခိုအောင်းနေကြပြီး ခရီးသည်တွေနဲ့ အလုပ်သမားတွေက အကခန်းမကနေ စန္ဒယားသံတွေကို ကြားကြရသလို တီးသူမရှိဘဲနဲ့ စန္ဒယားခလုတ်တွေလှုပ်ရှားနေတာကိုလည်း တွေ့ကြရပါတယ်။
အောက်မှာပြထားတဲ့ပုံကတော့ လန်ဒန်မျှော်စင်မှာ ခြောက်လှန့်လေ့ရှိတဲ့ အထင်ရှားဆုံး ၀ိညာဉ် Henry VIII ရဲ့ကြင်ယာတော်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Lady Jane Grey ရဲ့ပုံ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီမိဖုရားဟာ ၁၅၃၆ခုနှစ်မှာ ဒီမျှော်စင်မှာ ခေါင်းဖြတ်ပြီး ကွပ်မျက်ခံခဲ့ရပါတယ်။ အစိမ်းရောင်မျှော်စင် Tower Green နဲ့တော်ဝင်ဘုရားကျောင်းမျှော်စင် Tower Chapel Royal တို့အတွင်းမှာ ခေါင်းပြတ်ကိုကိုင်ထားတဲ့ သူမရဲ့ဝိညာဉ်ကို မကြာခဏဆိုသလို တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။
Photo:Portrait of Lady Jane Grey
မျှော်စင်မှာ ခြောက်လှန့်လေ့ရှိကြတဲ့ ထင်ရှားတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကတော့ Henry VI ၊ Thomas Becket နဲ့ Sir Walter Raleigh တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး ၀ိညာဉ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကတော့ Salisbury မြို့စားကတော် သေဆုံးတဲ့ဖြစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဆင့်ပြောစကားတွေအရ မြို့စားကတော်ဟာ ၁၅၄၁မှာ ရာဇ၀တ်မှုခင်းတစ်ခုမှာ ပါဝင်ပတ်သက်တယ်ဆိုတဲ့ စွဲချက်နဲ့ သေဒဏ်အပြစ်ပေးခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ (နောက်ပိုင်းကာလတွေမှာတော့ သူမမှာ အပြစ်မရှိကြောင်းကို လူအများက ယုံကြည်နေကြပါပြီ) ကြိုးစင်ဆီကို ခေါ်အသွားမှာ ရုန်းရင်းကန်ရင်းနဲ့ အတားအဆီးအစောင့်တွေဆီကနေ လွတ်ထွက်သွားခဲ့ပေမယ့် သူမနောက်ကနေထပ်ချပ်မကွာလိုက်တာခံရပြီး သူမရဲ့ခေါင်းကို လက်မရွံ့အာဏာသားရဲ့ ပုဆိန်နဲ့ ပေါက်ခွဲခံလိုက်ရပြီး သေပွဲဝင်ခဲ့ရရှာပါတယ်။ သူမကိုသေဒဏ်ပေးတဲ့ဖြစ်ရပ်ကို အစိမ်းရောင်မျှော်စင်က ၀ိညာဉ်တွေက နောက်ပိုင်းမှာ ပြန်ပြီးသရုပ်ဖော်ပြကြတာကို မြင်ကြရပါတယ်။
4. Woodchester Mansion, England
England နိုင်ငံက Gloucestershire မှာရှိတဲ့ Woodchester Mansion ကတော့ ၀ိညာဉ်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေတွေ့ရနိုင်တဲ့ နောက်ထပ်နေရာတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအဆောက်အဦကို အပြီးသတ်အောင်တောင် ဆောက်ထားခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ကျော်က ဒီအဆောက်အဦကိုဆောက်ကြတဲ့ အလုပ်သမားတွေဟာ ဆောက်လက်စအဆောက်အဦကနေ မကြာမကြာထွက်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်။ ကောလဟလတွေကတော့ အလုပ်သမား ခုနစ်ယောက်ဟာ အဆောက်အဦထဲမှာပဲ ရှင်းမပြနိုင်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့် သေဆုံးခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
လက်သမားအိမ်ပြိုကျတဲ့အသံတွေ၊ ဟစ်အော်တဲ့အသံတွေကို မကြာခဏကြားကြရသလို ရောမခေတ်ကစစ်သားတွေနဲ့ အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ပုံရိပ်တွေကိုလည်း မကြာခဏဆိုသလို မြင်ရတယ်လို့ သတင်းပို့ကြပါတယ်။ ဒီစံအိမ်မှာ သရဲလိုက်ပွဲကို နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ကျင်းပပေးလေ့ရှိပါတယ်။
5. The Paris Catacombs
ပဲရစ်မြေအောက်ဂူသင်္ချိုင်းဟာ မြေအောက်ဝင်္ကပါဂူလမ်းကြောင်းဖြစ်ရုံသာမက မြို့လမ်းမတွေအောက်က မြေအောက်သိုလှောင်ခန်းတစ်ခန်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ပါးရှန်းလူမျိုး တွေဟာ သေသူတွေရဲ့ အရိုးတွေကို ဒီဂူသင်္ချိုင်းမှာ နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ်လောက်ကြာအောင် မြှုပ်နှံခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဂူသင်္ချိုင်းကို မဖန်တီးခင် ၁၇၀၀အလယ်ပိုင်းနှစ်တွေမှာ မြို့နေလူထုဟာ သူတို့ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကို ရိုးရိုးသုဿာန်မှာပဲ သင်္ဂြိုလ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြို့အရွယ်ကြီးမားဖွံ့ဖြိုးလာတာကြောင့် သုဿာန်အတွက် နေရာမရှိလောက်အောင် ဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒါကြောင့် ပဲရစ်ကျောက်မိုင်းအောက်နေရာကို သုဿာန်အဖြစ်သုံးကြဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရ ၁၇၈၆ကနေ ၁၇၈၈အတွင်းမှာပဲ ပဲရစ်မြို့ပြသုဿာန်က အရိုးတွေကို မြေအောက်ကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီလုပ်ရပ်ဟာ သေသူတွေကို ဂုဏ်ပြုဖို့အမြော်အမြင်ကြီးကြီးနဲ့ လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အရိုးတွေမရွှေ့ပြောင်းခင်မှာ ဒီမြေအောက်ဥမင်ကို ကောင်းချီးမင်္ဂလာပေးခြင်း အရင်လုပ်ခဲ့တာပါ။ အရိုးတွေကို ဘုန်းတော်ကြီးတွေခြံရံထားတဲ့ လှည်းတန်းတွေနဲ့ တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် စီတန်းလှည့်လည်ပြီးမှ ညပိုင်းအချိန်တွေမှာ ရွှေ့ပြောင်းပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ၁၈၁၄ခုနှစ်ကစလို့ ဒီဥမင်ကို ပဲရစ်သုဿာန်က အရိုးတွေကို စုဆောင်းထ်ိန်းသိမ်းတဲ့နေရာအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တာ အခုအချိန်မှာတော့ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ပါးရှန်းလူမျိုးအရိုးပေါင်း ၆သန်း၊ ၇သန်းလောက်ရှိနေခဲ့ပါပြီ။
အင်္ဂလန်နိုင်ငံရဲ့ လူသိများတဲ့ သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာတွေထဲမှာ Wales ပြည်နယ် Llanfihangel Crucorney မှာရှိတဲ့ Skirrid Mountain Inn လည်း အပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းလက်ဆင့်ကမ်းဇာတ်လမ်းတွေအရ ဒီတည်းခိုရိပ်သာသက်တမ်း နှစ်ပေါင်း၉၀၀အတွင်းမှာ လူပေါင်း၁၈၀ကျော်လောက်ဟာ လှေကားပေါ်က မီးပန်းဆိုင်းမှာ ကြိုးဆွဲချပြီးအသတ်ခံခဲ့ကြရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလှေကားပေါ်က ကြိုးရာတွေကို ဒီနေ့အထိမြင်ကောင်းမြင်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဧည့်ရိပ်သာရဲ့ ပထမထပ်ဟာ အတိတ်ကာလတုန်းက တရားခွင်ရုံးခန်းဖြစ်မယ်လို့ ယူဆရပါတယ်။
ဒီဧည့်ရိပ်သာမှာ ဖန်ခွက်တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို အခန်းကိုဖြတ်ပြီး သူ့အလိုလိုပျံလာလေ့ရှိပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်တွေမှာ လူတွေရဲ့မျက်နှာတွေကို မြင်ကြရပြီး ဧည့်သည်တွေဟာ သူတို့လည်ပင်းမှာ ကြိုးကွင်းစွပ်ခံရသလို ခံစားချက်တွေလည်း ရလေ့ရှိပါတယ်။ ဧည့်ရိပ်သာမှာလာတည်းကြတဲ့ ဧည့်သည်တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ပူလောင်တဲ့ရာသီဖြစ်ပေမယ့် အခန်းထဲမှာ ရေခဲမတတ် အဆမတန်အေးနေတာရယ် တစ်ယောက်ယောက်က ထိုင်ကြည့်နေသလိုခံစားရတာရယ်ကြောင့် ညဘက်မှာလန့်နိုးရကြောင်း ပြောကြပါတယ်။ ဧည့်ရိပ်သာမှာရှိတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေအနက်က ၁၇ရာစုက ဘားကောင်တာထိုင်အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Fanny Price ဟာ အလှုပ်ရှားဆုံး ၀ိညာဉ်ဖြစ်နေပါတယ်။ တည်းဖူးကြတဲ့ လူတွေကတော့ ဒီဧည့်ရိပ်သာဟာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးရိပ်သာထဲမှာ ပါတယ်လိုဆိုကြပါတယ်။
7. Rose Hall, Jamaica
ဂျမေကာနိုင်ငံဟာ ၀ိညာဉ်ဆိုင်ရာအဆောက်အဦတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျော်ကြားမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံလို့ထင်ရင်တော့ မှားပါလိမ့်မယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆ်ိုရင် Montego မှာရှိတဲ့ Rose Hall ဟာ သရဲခြောက်တယ်လို့ ထင်ရှားတဲ့နေရာတစ်ခု ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဒီအိမ်ဟာ ဗူးဒူးမှော်ဆရာမတစ်ဦးရဲ့ သမီးဖြစ်တဲ့ Annie Palmer ရဲ့ဝိညာဉ်ပျော်စံရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူမရဲ့သွေးစက်တွေဟာ မကြာခဏဆိုသလို ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက် ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သူမဟာ လိင်စိတ်လွန်ကဲမှုနဲ့ နှိပ်စက်မှု၊ လူသတ်မှုတွေကို ၁၁နှစ်ကြာအောင်ကျူးလွန်ပြီးချိန်မှာတော့ သူမရဲ့အိပ်ရာထဲမှာပဲ အကြမ်းဖက်ခံရပြီးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ ခင်ပွန်းသုံးယောက်ကို သေကြောင်းကြံစဉ်ခဲ့ပြီး သူမရဲ့အပျော်ယောက်ျားကျွန်တွေကိုလည်း အဆိပ်ခတ်၊ လည်ပင်းညှစ်၊ ပညာနဲ့ပြုစားပြီး သတ်ခဲ့ပါတယ်။ အလောင်းတွေကိုတော့ ကျန်တဲ့ကျွန်တွေက ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းကနေသယ်သွားပြီး ကမ်းခြေမှာမြှုပ်နှံပေးကြရပါတယ်။ ဒဏ္ဏာရီပုံပြင်တွေကတော့ အိမ်ကြီးအတွင်းမှာ Annie Palmer ရဲ့ဝိညာဉ်လှည့်ပတ်သွားလာနေတာတွေ့ရတာဟာ အသည်းငယ်ဖို့ကောင်းသလို သူမရဲ့ယာဇ်ပူဇော်ဖို့ နှိပ်စက်ခံ၊ အသတ်ခံကြရတဲ့ ကလေးကျွန်တွေရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေကို မြင်ရတာကလည်း ခြောက်ခြားစရာကောင်းလွန်းတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သတင်းတွေရဲ့အဆိုကတော့ သူမရဲ့ပုရိသသားကောင်ဝိညာဉ်တွေကို အသံကြားရရုံသာမက ရုပ်သံကင်မရာတွေမှာပါ ဖမ်းမိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ညဘက်မှာ သွားပြီးတည်းဖို့၊ ခိုဖို့ကောင်းမယ့် နေရာတစ်ခုမဟုတ်တာတော့ သေချာပါတယ်။
8. The Bell Farmhouse, Tennessee
Bell လယ်တောက ခြောက်တဲ့သရဲကတော့ သဘာဝလွန်ဖြစ်ရပ် လေ့လာလိုက်စားကြတဲ့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ သက်ရှိလူသားကိုပါ သေစေတဲ့သရဲအဖြစ်နဲ့ ထင်ရှားလှပါတယ်။ ၁၈၁၇ကနေ ၁၈၂၁အတွင်းမှာ အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ Bell မိသားစုကို အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်ခဲ့ပါတယ်။ သူမကတော့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ Bell Witch လို့အမည်ပေးခံရတဲ့ 'Kate' ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ လယ်တောပိုင်ရှင် John Bell ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါးနှိပ်စက်ပြီး အသက်ပါသေစေခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ အာရုံကြောမူမမှန်တဲ့ ရောဂါကိုခံစားနေရသူဖြစ်ပြီး Kate ရဲ့လှောင်ပြောင်သရော်မှုတွေက ရောဂါပိုတိုးစေခဲ့ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် John Bell ရဲ့အလောင်းထားတဲ့နေရာအနီးမှာ အနက်ရောင်ထိုးဆေးပုလင်းတစ်လုံးကိုလည်း တွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ သဘာဝလွန်သုတေသီတွေက Kate ရဲ့ဝိညာဉ်ကို ခေါ်ယူမေးမြန်းကြတဲ့အခါ သူမက အဲဒီဆေးပုလင်းဟာ John Bell ကိုသူမထိုးပေးတဲ့ဆေးဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီဆေးပုလင်းကပဲ John Bell ကိုအသက်ဆုံးစေခဲ့တယ်လို့ သုတေသီတွေက ယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ ဆေးရည်ရဲ့ အာနိသင်တွေကို စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့အတွက် ဆေးရည်တစ်စက်ကို အိမ်မွေးကြောင်တစ်ကောင်ရဲ့ လျှာပေါ်ကိုတင်ပေးလိုက်တဲ့အခါ ကြောင်ကလေးဟာ ချက်ချင်းသေသွားတာကို တွေ့ကြရပါတယ်။ ဒီလယ်တောအိမ်ဘေးမှာ လက်ရှိနေကြတဲ့ မိသားစုဝင်တွေကတော့ Kate ဟာ အခုလို ၀ိညာဉ်ဘ၀မှာလည်း စိတ်သဘောကောင်းဦးမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆကြပါတယ်။
Edinburgh Castle ဟာ Scotland နိုင်ငံမှာ သရဲအခြောက်ဆုံး နေရာထဲမှာ တစ်ခုအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ Edinburgh ရဲတိုက်ဟာ ဥရောပမှာ သရဲအခြောက်ဆုံးနေရာလို့်လည်း ယူဆကြပါတယ်။ ဧည့်သည်တွေကတော့ ရဲတိုက်မှာ မကောင်းဆိုးဝါးပုလွေသမားတွေ၊ ခေါင်းပြတ် ဗုံတီးသမားတွေ၊ ခုနစ်နှစ်စစ်ပွဲက ပြင်သစ်အကျဉ်းသားတွေရဲ့ ၀ိညာဉ်တွေ၊ အမေရိကန်ပြည်တွင်းစစ်က ကိုလိုနီအကျဉ်းသားတွေတင်သာမက ခွေးသင်္ချိုင်းက ခွေးသရဲတွေပါ လှည့်လည်သွားလာနေတာကျု တွေ့ကြရတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
အထက်ကပုံကတော့ သက်တမ်း၉၀၀ကျော်ရှိတဲ့ သမိုင်းဝင်ခံတပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ ခံတပ်ရဲ့ ရှေးဟောင်းမျှော်စင်က အခန်းငယ်တွေထဲမှာ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ အလောင်းတွေရှိနေပြီး လှုပ်လှုပ်ရှားရှားရှိလှတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေရဲ့ ထာဝရနေရာအဖြစ် ကျော်ကြားပါတယ်။
10. Bhangarh Town and Fort, India
အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေဟာ သရဲတွေ၊ ၀ိညာဉ်တွေအကြောင်းကို တော်တော်လေးသိကြနားလည်ကြပါတယ်။ ဒေသခံတွေက Bhangarh ခံတပ်၊ ခံတပ်ပတ်ဝန်းကျင်နေရာတွေ၊ ကျယ်ပြန့်တဲ့ သူရဲခိုနေရာတွေဟာ ထူးဆန်းအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ အတူမြို့နဲ့ ခံတပ်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမှုကို အားဖြည့်ပေးနေတယ်လို့ ယုံကြည်ကြပါတယ်။ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ခရီးသည်တွေကို မြို့ပျက်နဲ့ ခံတပ်နေရာတွေကို နေ၀င်ပြီးရင် မသွားကြဖို့ သတိပေးထားပါတယ်။ မင်းသမီးတစ်ပါးရဲ့ နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရတဲ့ ပညာသည်ဆိုးတစ်ယောက်က မြို့ကို ကျိန်စာတိုက်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒီ၁၇ရာစု မြို့တော်ဟောင်းဟာ မကြာခင်မှာပဲ စစ်တပ်တစ်ခုရဲ့ ချီတက်ဖျက်ဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ဘုရားကျောင်းတစ်ခုသာ အဖျက်ဆီးမခံရပဲ ကျန်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ မြို့ကိုလူတွေစွန့်သွားကြပါတော့တယ်။ ခရီးသည်တွေပြောစကားအရ ငှက်တွေနဲ့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေဟာ ညအချိန်မှာ ပညာသည်ကျိန်စာတိုက်ခဲ့သလို မြို့ထဲကို တိတ်တဆိတ်နဲ့ ရောက်လာလေ့ရှိပါသတဲ့။ ဘယ်သူမှလည်း ဒီနေရာမှာ ညမအိပ်ရဲကြပါဘူးတဲ့။
သရဲရှိတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ကို ယုံသည်ဖြစ်စေ၊ မယုံသည်ဖြစ်စေ
ရောက်တာနဲ့ ချက်ချင်း လှည့်ပြန်ချင်စိတ်ပေါ်လာစေတယ်ဆိုတာတော့ ငြင်းဖို့ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
အတွေးတွေလွန်ကဲလို့ပဲလား ကယောင်ကတန်းပြောကြတဲ့ သတိပေးချက်တွေပဲလား ဆိုတာတော့ ကိုယ်တိုင်ပဲသွားကြည့်ပြီး ဆုံးဖြတ်စေချင်ပါရဲ့။ ။
Posted by Han Kyi at 1:37:00 pm